Madadaalada Maanta: Juxa Iyo Ninkii Taajirka Ahaa Sheeko Qosol Badan (Funny Time) – Filimside.net
Madadaalada Maanta: Juxa Iyo Ninkii Taajirka Ahaa Sheeko Qosol Badan (Funny Time)
Juxa ayaa waxay caado u ahayd inuu Illaahay baryo salaad kasta ka dib , waxaana ducadiisa kamid ahayd Illahayow 1000-dirham oo dahab ah isii, iyo inaanuu qadaneyn haddii lacagtaasi noqoto 999-Dirham .
juxa waxaa daris la ahaa oday taajir ah oo markasta ducada juxa maqli jiray , waxa uu odaygaasi go’aan saday inuu bal imtixaano Juxa Ducadiisa ma runbaa mise? Waxa uu soo qaaday 999-dirham , waxaanuu soo dhigay kiish ayar markii lagaadhay wakhtigii casrka , xilli uu juxo Illahay baryayay uuna ku jiray wakhtigii ducada , Juxa waxaa usoo dhacay kiishkii ay lacagtu ku jirtay , ninkii odayga ahaana waa uu dhuuntay , isagoo fiiro gaar ah u leh isla markaana eegaya bal sida uu wax yeeli doono Juxa.
Juxa aad ayuu u farxay , farxad aan la qiyaasi karin , Illahay ayuu u sujuuday , kadib waxa uu guda galay inuu lacagtii tiriyo , waxa uu arkay in dirham maqan yahay , wax dana kamuu galin , waxaanuu yiri: Allihii intan Isiiyay igama bakhaylayo 1-dirham qudha oo wuu isiinayaa , kadibna lacagtiisii ayuu iska xareystay , lacagtuna waxay ahayd lacag aad u farabadan uguna filnayd taajirnimo .
Ninkii taajirka ahaa ayaa usoo cararay Juxa kadibna ku yidhi intuu qoslay :”dahabkayga iisoo celi , waxaan doonayay inaan ku imtixaano oo kaliya , waxaanan ogaaday inaadan ku koobnaanay wixii aad codsatay , waxaad ballan qaaday inaadan qaadanayn haddii lacagtu noqoto 999-dirham, balankii waad ka baxday oo waad xareystay , dantii aan imtixaankaaga ka lahaa waan ka gaadhay .
Juxa oo la yaabban ayaa waxa uu ku yidhi:”Dahabkeed ka sheekaynaysaa !!!!, oo waligay miyaad wax isiiyay ?
Taajirkii: Juxow dahabkan anaa iska leh , ee mid samada kaaga soo dhacay maaha.
Juxaa : Ninyahow waxaad ku dhawdahay waalli , sheekadaa raqiiska ahna cidi kaa akhrisan mayso , yaa lacagta intaa le’eg ciyaar ku bixinaya? Illahay ayaan baryay ducadeydaanna ku helay !
-Inbadan ayaa doodu socotay , iyadoo juxa wax jixinjix ah aanuu muujinayn , ayaa ugu dambayntii ninkii taajirka ahaa waxa uu keenay fikrad ahayd : waxaan doodeena kusoo af jari karnaa maxkamadda , ina keen aan qaadiga u wada tagnee.
Juxaa : Anigu ma awoodo inaan maxkamadda aado , maxaayeelay? qaadigu meel fog ayuu dagan yahay , jawiguna waa qabow dhar igu filan oo aan dhaxantaa iskaga celiyana ma haysto.
Taajirkii : Anigaa kusiinaya Baqashayda iyo Cumaamadayda, jaakadda intaba, , anaana u dulqaadnaya qabowga iyo socodka dheer ee mar un nagee maxkamadda.
-ninkii taajirka ahaa lugihiisa ayuu ku socday isagoo dharkii dhaxantana uu wato juxa, maxkamaddii ayaa la gaadhay , taajirkii ayaa bilaabay hadalkiisa waxa uu goobtii maxkamadda ka sheegay doodiisii , kadib juxaa hadalkii lagu wareejiyay.
Juxa: qaaddi bal ninkaa ganacsadaha ah weydii tolow wax shilin ah waligay ma isiiyay , wax yarba ha noqotee? Illahay ayaan dahab ka codsaday isagoo awoodiisu ay badan tahay wax kastana ii awooda inuu isiiyo , kadibna ducadaydii ayaa Illahay aqbalay , ninkani waxa uu ku dacwoonayo waxba kama jiraan.
waxanan uu sheeganayaa waa khiyaano uu doonayo in hantidan Illahay isiiyay igala wareego , haddii uu doono xitaa waxa uu sheeganayaa baqashayda banaanka taagan anaa iska leh ayuu leeyahay .
-Ninkii taajirka ahaa ayaa ishayn kari waayay markaas ayuu ka baqay inuu lacagta iyo baqasha isku darsado “oo ma waxaad inkiraysaa baqashayda aan kugu keenay Maxkamadda!.
Juxa: Qaadi ma maqshay waxa uu sheegayo waaba dacwad cusub hadana!, waxaan ka baqayaa inuu sheegto dharkan aan xiranahay inuu isagu leeyahay ?!
Ninkii taajirka ahaa aadbuu iskugu dhexyaacay oo miyaanan lahayn dharkan aad wadato oo aanan dhaxanta kaaga soo xidhin.
Dacawadii Juxaa ku guulaystay oo loo xukumay , markii laga soo dareeray maxkamadda ayaa juxa ninkii lacagtii u tuuray oo uu ku yidhi: Marna ha dhexgalin Illahay iyo addoomadiisa.
Waxaa Aqrisay 2,101
Gurey ibnu Gurey says:
sheekadaas caadi maaha ninkii taajirka ahaa waxaa la dareensiiyey inuu khaldanaa oo dadka lagu ciyaarin